Zụta TPE Mmekọahụ Mmekọahụ Dị ọnụ ala maka ire Ahịa
Kedu ihe bụ ọnụahịa kacha mma TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
TPE ụmụ bebi isii Ezubere iji nye gị ezigbo obi. Ha dabara adaba maka ndị hụrụ nwa bebi n'anya ma ọ bụ ụmụ bebi nwere obere ego. N'ihi na akpụkpọ anụ nwa bebi nke eji ihe TPE mee na-agbanwe, ọ dị nro ma dị ka ezigbo akpụkpọ anụ mmadụ. Ihe TPE dị ọnụ ala karịa silicone, ọbụnakwa ndị nkịtị nwere ike ịzụta doll mmekọahụ nke aka ha. Nke a bụ ụmụ bebi TPE kachasị mma. You bụ onye na-agba akwụna nke ụmụ bebi mmekọahụ? Ọ na-ewute gị n'ihi na ị hụghị nwa bebi na-eme gị obi ụtọ? Ikekwe ị maghị nwa bebi dị mma maka gị. Mgbe ị bịara ebe a, ị bụ onye nwere ihu ọma. N'ebe a, ị nwere ike ịzụta ọnụahịa mmekọahụ TPE kachasị ọnụ ala ma dị elu, ezigbo anụ ahụ na-adị, dị ezigbo adị. Ọ dị mma maka ụmụ mmadụ, ime ahụ bụ ọkpụkpụ na-adịgide adịgide nke nwere ike igboju ọnọdụ ọ bụla ịchọrọ. Anyị pụrụ iche elu uzu na ikenyeneke mbiet nkà.
Setlla - 148CM Nnukwu nnụnnụ mmiri Skin Skin TPE Mmekọahụ
Nwa nwanyi Japanese Tanabe Reiko TPE Mmekọahụ Mmekọahụ 100CM Flat Chest Round Face
157CM Student B Cup Ara Ara TPE Mmekọahụ Doll Simona
Ekeresimesi Mara Mma Mma Vanessa Nnukwu Anụmanụ Ogologo Adkwụ Okenye TPE ...
Parker - 157CM B-cup Mara mma Ihu WM NO.33 Head Tan Skin TPE Mmekọahụ Doll
Galbraith - 157CM B-iko onye egwuregwu WM NO.334 Isi Pụrụ Iche Nwanyi Onye Agha ...
Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Mma Mma Anya Anya Nnukwu Ugwu 158CM T ...
Olga - 158CM Nnukwu Isi European Style Brown Skin TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Jọdan - 158CM Nnukwu anụ ọhịa Asia Style White Skin TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Ogologo PEdị PEmụ nwanyị Mmekọahụ TPE Zụrụ Ọnụ Ahịa
TPE bụ ihe na-agbanwe agbanwe. A na-eji ya ugbu a n'ịmepụta ụmụ bebi mmekọahụ. A na-eji akwa TPE silicone (nke a makwaara dị ka roba thermoplastic), nke a na-ejikarị akpụkpọ anụ ụmụ nwoke na-emekọ ihe ọnụ, nke bụ ezigbo akpụkpọ anụ mmadụ. Ọ bụ ndị nna-ukwu nwere ọmalị na-akpụzi nwa bebi urdolls niile, nkọwa niile dịkwa mma. Anyị emeriwo nnabata nke ọtụtụ puku ndị ahịa na ọkachamara, nraranye na àgwà siri ike. Anyị nwere obi ike ịnye gị ngwaahịa kachasị mma na ahụmịhe kachasị mma. Egbula ịtụ nwa bebi gị. Ha ga-abịakwute gị ozugbo enwere ike isoro gị ma wetara gị obi ụtọ na-enweghị njedebe. Gaghị echegbu onwe gị gbasara ịtamu n’ihi na ha na-eme gị obi-ụtọ mgbe nile. Ha adịla njikere. Bido ndụ obi uto gị na ụmụ bebi mmekọahụ ugbu a, nke bụ nnukwu uru ego. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ụmụ bebi ndị na-esonụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka enyemaka. Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka.
Video banyere mmekọahụ ụmụ bebi TPE: